CHECK एस्टा स्थिति - एस्टअमेरिका अमेरिका यूएसएए ई-दाखिला यात्रा सेवा
तपाईंको ESTA स्थिति जाँच गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईंको जानकारी पुन: प्राप्त गर्न निम्न जानकारी आवश्यक छ। यदि तपाइँ आफ्नो आवेदन नम्बर थाहा छ भने, कृपया तल ई-फाइल भर्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो आवेदन नम्बर थाहा छैन भने, कृपया ई-फाइल ए नयाँ अनुप्रयोग।
पुनर्प्राप्त आवेदन स्थिति
सबै क्षेत्रहरु आवश्यक छ।
तपाईं ESTAmerica.org मा यहाँ लागू गर्नुभयो?*
ईमेल को रसीद को साथ भुगतान को समय
म गोपनीयता नीतिसँग सहमत छु।
यदि तपाईंले ESTAmerica.org मार्फत आवेदन गर्नुभयो भने यो सेवा नि: शुल्क छ! कृपया फिर्ता जानुहोस् र तपाईंको रसिद नम्बर थप्नुहोस्।
कार्ड नम्बर महिना010203040506070809101112 वर्ष20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038 म्याद समाप्त हुने मिति सुरक्षा कोड कार्डधारक नाम
तपाई सामान्यतया केहि घण्टा भित्र तपाईंको एस्टए यात्रा प्राधिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ। यद्यपि, समीक्षा गर्दै, र अनुप्रयोगको प्रशोधनले लामो समय लिन सक्छ। यस अवस्थामा, तपाइँ आफ्नो यात्रा प्राधिकरण कम्तिमा भित्र तपाईंलाई ईमेल पठाउन सक्नुहुनेछ 72 घण्टा। कृपया तपाईंको समय समीक्षा र प्रसोधन गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुहोस्। यदि हामी तपाईंको ESTA यात्रा भिसा पासपोर्ट आवेदनको साथ समस्या पत्ता लगाउछौं भने, हामी फोन नम्बरमा पुग्न प्रयास गर्नेछौं, र अनुप्रयोगमा इमेल गर्नेछौं।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले गलत जानकारी दिनुभयो वा तपाइँको ESTA यात्रा भिसा पासपोर्ट अनुप्रयोगमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ भने, तपाई सँधै ई - फाइल पुन: फाइल गर्न सक्नुहुन्छ वा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ 24 /7हौं।
मेरो पासपोर्ट जानकारी परिवर्तन भएको छ वा म्याद सकिएमा मैले के गर्नुपर्छ?
नयाँ पासपोर्ट प्राप्त गर्नुहोस् वा तपाईंको पासपोर्ट जानकारीको लागि परिवर्तन हो, तपाईले नयाँ एस्ट्रा भिसा पासपोर्ट भ्रमण प्राधिकरणको लागि आवेदन गर्नु पर्छ। मैले कुन जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्छु? जानकारीको पूर्ण लिस्टको लागि जुन तपाइँको अनुप्रयोग पेश गरे पछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
मेरो ESTA अनुप्रयोगमा कुन जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्छु?
आवश्यक भुक्तानी जानकारीको साथ (ईटीए) इलेक्ट्रोनिक ट्रेवल प्राधिकरण अनुप्रयोग पेश गर्नु अघि, तपाईं पासपोर्ट नम्बर र पासपोर्ट जारी जारी देश बाहेक सबै अनुप्रयोग डेटा क्षेत्र अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक आवेदन स्वीकृत भएपछि, तपाइँ अझै पनि निम्न क्षेत्रहरू मध्ये कुनै पनि अद्यावधिक गर्न सक्नुहुनेछ:
के मेरो ESTA आवेदनमा गल्ती छ भने?
ESTAmerica.org ले आवेदकहरूलाई अनुमति दिन अघिको डेटा समीक्षा र सुधार गर्न अनुमति दिन्छ, सहित पासपोर्ट नम्बर पुन: पुष्टि गर्दै। आवश्यक भुक्तानी जानकारीको साथ अनुप्रयोग पेश गर्नु अघि, तपाईं पासपोर्ट नम्बर र पासपोर्ट जारी गर्ने देश बाहेक सबै अनुप्रयोग डेटा क्षेत्रहरू सच्याउन सक्नुहुनेछ। यदि एक आवेदकले उनीहरूको पासपोर्ट वा जीवनी जानकारीमा गल्ती गरे भने उसले उनीहरूलाई नयाँ आवेदन पेश गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक नयाँ आवेदन पेश गरिएको सम्बन्धित शुल्क शुल्क लगाइनेछ।